Jailbreak | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
TaiG Jailbreak tool v1.2.1 for iOs 8.0 - 8.1.2
နောက်ဆုံးထွက် TaiG Jailbreak tool v1.2.1 ၊ iOs 8.0 ကနေပြီး 8.1.2 အထိ jailbreak လုပ်လို့ ရတယ်
Compatible iOS Devices for TaiG iOS 8.1.2 / iOS 8.2 Jailbreak:
Compatible iOS Firmware for TaiG iOS 8.1.2 / iOS 8.2 Jailbreak:
iOS 8.2 Beta Firmware
iOS 8.2 Beta2Firmware
iOS 8.2 Beta3Firmware
iOS 8.2 Beta4Firmware
ref : www.trtech.technology
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, February 16, 20152comments:
ကဏ္ဍ iOS, iPhone, Jailbreak, Phone Application
iOS 8.1.2 ကို Jailbreak ပြုလုပ်နိင်သော TaiG Jailbreak Tool ဗားရှင်း အသစ် ထွက်ရှိလာ
Apple က ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့တွင် iPhone / Pad / Pod touch များ အတွက် iOS 8.1.2 ကို ထုတ်ပေး လိုက်ပြီး
ဒီဇင်ဘာ ၁၀ ရက်နေ့တွင် TaiG Jailbreak Team က iOS 8.1.2 ကို Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော TaiG Jailbreak
Tool ဗားရှင်း အသစ် 1.2.0 ကို ထပ်မံ ထုတ်ပေး လိုက်သည်။
iOS 8.1.2 တင်ပြီး Jailbreak မရမှာ စိုးရိမ်နေသူတွေ အတွက် သတင်းကောင်း ပါပဲ။ iOS 8.1.1 – 8.1.2
တို့ကို Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်သော TaiG Jailbreak Tool v1.2.0 ကို အောက်က link မှာရယူနိုင်ပါတယ်။
Download TaiG Jailbreak Tool v1.2.0
▼ apt.taig.com ▼ OR ▼ userscloud.com ▼
Note : Jailbreak မပြု လုပ်ခင်တွင် Setting > iCloud ထဲမှ Find My iPhone အား off ထား ရပါမည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, December 17, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, Jailbreak, Phone Application
iOS 8.0 မှ 8.1.2 ထိ jailbreak နဲ့ မြန်မာစာ ထည့်သွင်းနည်း
iDevice ကို Jailbreak မပြုလုပ်ခင် အောက်ပါ အချက်များကို စစ်ဆေးပေးပါ။
passcode ခံထားလျှင်ပိတ်ပါ။ via: Settings - Passcode - Turn Passcode Off
"Find my iPhone" ကိုပိတ်ပါ။ via: Settings - iCloud - Find My iPhone - Click to turn off
Version သည် iOS 8.0 မှ 8.1.2 ထိဖြစ်ရပါမယ်။
iTune နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ဖြစ်ရပါမယ် ။
iTune နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း ကို အောက်ကလင့်မှာ download ယူလိုက်ပါ။
▼ iTune နောက်ဆုံးထွက် ဗားရှင်း ▼
TaiG Jailbreak tool ကို အောက်ကလင့်မှာ download ယူလိုက်ပါ။
▼ TaiG Jailbreak tool ▼
Jailbreak tool ကို download ပြီးပြီ ဆိုရင် ဖွင့်ပြီး iDevice ကို ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ဆက်လိုက်ပါ အောက်က
"3K Assitant l 1.0.1 l Jailbreak and Live Different.'' ကို အမှန်ခြစ်ဖြုတ်ပါ jailbreak tool က iDevice
ကိုသိပြီ ဆိုတာနဲ့ မိမိ iDevice နဲ့ Version ကို ပြပေး ပါလိမ့်မယ် Start ကိုနှိပ်ကာ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ :D
iDevice က ပိတ်သွားပြီး ပြန်တက်လာချိန်မှာ Tool မှာလည်း Jailbreak Successful ပေါ်လာရင်တော့ Jailbreak လုပ်တာအောင်မြင်ပြီဖြစ်ပြီး မိမိ iDevice မှာ Cydia icon လေးကိုမြင်ရပြီပဲဖြစ်ပါတယ်
မြန်မာ Font ထည့်သွင်းရန် အတွက် "cydia.myrepospace.com/komin27" repo မှ Zawgyi 4.3 font နဲ့
Myanmar keyboard for iOS 7+ တို့ကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုနိုင် ပါတယ်ခင်ဗျာ။
မျှဝေသူ Ming Y Rau မှာ Sunday, December 14, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, Jailbreak, Phone Application, ဖုန်းနည်းပညာ, မြန်မာဖေါင့်
iOs 8.1.1 အတွက် jailbreak tool ထွက်ရှိ (TaiG jailbreak tool v1.0.1)
iOs jailbreak ပြုလုပ်နည်း ။ ။
၁။ ။ iDevice တွင် Passcode, Touch ID, Find my iPhone တို့ကို ပိတ်ထားပါ။
၂။ ။ iDevice ကို TaiG jailbreak tool နှင့် ချိတ်ပါ။
၃။ ။ TaiG jailbreak tool တွင် Cydia 1.1.16 တစ်ခုပဲ marking လုပ်ပါ။
၄။ ။ အဓိမ်းရောင် စာသား လေးကို နှိပ်ပြီး jailbreak လုပ်ပါ။
၅။ ။ ပြုလုပ်ပြီးရင် လူပုံလေး ရယ်နေတဲ့ အောက်က အစိမ်းရောင် တရုတ်စာကို နှိပ်ရင် jailbreak လုပ်ပြီးစီး
ပြီး iDevice ပြန်တက် လာရင် Cydia ပေါ်လာပါပြီခင်ဗျာ။
▼ Official site to download ▼ OR ▼ Dropbox to download ▼
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Sunday, November 30, 2014 No comments:
ကဏ္ဍ iDevice, iPhone, Jailbreak, Phone Application
iOS 8, iOS 8.0.1 , iOS 8.0.2 , iOS 8.1 Device များကို Jailbreak ပြုလုပ် ထားကြ သူများ အတွက် ယခု
လတ်တလောတွင် iOS 8 – iOS 8.1 နှင့် ကိုက်ညီမှု ရှိသော Jailbreak Apps နှင့် Tweaks များစာရင်းကို
ကဏ္ဍ iPhone, Jailbreak, မိုဘိုင်းဖုန်းဆောင်းပါး
iOS 7.1 နဲ့ iOS 7.1.1 ကို Pangu ဆိုတဲ့ App လေးနဲ့ Jailbreak ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ….
Pangu ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါ အဆင့် အတိုင်းပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။
၆။ တစ်ဝက်လောက်မှာ ရပ်သွားရင် ဖုန်းကို unlock လုပ်ပြီး pangu ပုံလေးကိုနှိပ်ပါ။
၇။ jailbreak လုပ်ပြီးဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာဖောင့် နှင့် ကီးဘုတ်သွင်းနည်း
မြန်မာဖောင့်နှင့်ကီးဘုတ်သွင်းရန် ကျွန်တော့် Repo ကို Add ပေးပါ
Add ပြီးလျှင် Komin27 Source ထဲကို ဝင်ပါ Zawgyi iOS7Font ကိုရှာပြီး install လုပ်ပါ။
Restart ကျပြီးပြန်တက်လာတာနဲ့ မြန်မာ ကီးဘုတ်လဲ အဆင်ပြေတာတွေ့ ရမှာပါ…။
အဲဒါဆို Jailbreak နဲ့ မြန်မာစာ သွင်းတာ ပြီးဆုံးပါပြီ အားလုံး အဆင်ပြေ ကြပါစေ။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် iphone 4s လေးနဲ့ သေချာ စမ်းပြီးတော့မှ တင်ပေး လိုက်တာပါ…အခုပို့စ်လေးကို PDF
ဖိုင်လေး အဖြစ်လိုချင်တယ် ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ဒေါင်းယူပါ....။
From: Internet for Myanmar by MMITShare
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, July 10, 20142comments:
ကဏ္ဍ iPhone, Jailbreak, Phone Application
Pangu ဖြင့် iOS 7.1-7.1.2 ကို jailbreak ပြုလုပ်ခြင်း
တရုတ် jailbreaker တွေက ဖြန့်ချိ ပေးလိုက်သည့် Pangu သည် လုံခြုံရေး ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များအကြား
အငြင်း ပွားစရာ ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း အချို့သော လုံခြုံရေး ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်များက Pangu jailbreak တွင်
malware မပါဝင်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် iOS 7.1 မှ 7.1.2 အထိ အသုံးပြုထားသော iOS ထုတ်ကုန်များကို jailbreak ပြုလုပ်ရန် စိတ်ဝင်
စား သူများအတွက် Pangu tool ဖြင့် jailbreak ပြုလုပ်နည်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
Pangu ဖြင့် jailbreak လုပ်နိုင်သည့် iOS ထုတ်ကုန်များ
Pangu ဖြင့် jailbreak လုပ်နိုင်သည့် iOS 7.1 မှ iOS 7.1.2 အထိ အသုံးပြု ထားသော ထုတ်ကုန် များမှာ
iOS 7.1.2 ကို upgrade ပြုလုပ်ပြီး jailbreak ပြုလုပ်လိုသူများ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါ link များမှ iOS 7.1.2 ကို download ပြုလုပ်နိုင်သည်။
iOS ထုတ်ကုန်ကို Backup ပြုလုပ်ခြင်း
Jailbreak ပြုလုပ်ရာတွင် error များနှင့် ကြုံတွေ့ နိုင်သောကြောင့် ထုတ်ကုန်ရှိ အချက် အလက်များ ဆုံးရှုံးမှု
မဖြစ်စေရန်အတွက် backup ပြုလုပ် ထားသင့်သည်။
iTunes ကိုဖွင့်ပြီး backup ပြုလုပ်လိုသည့် ထုတ်ကုန်ကို PC/ Mac တွင် ချိတ်ဆက်ကာ iTunes ရှိ Back UP
Now ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Mac/Windows ပေါ်တွင် Pangu ဖြင့် iOS 7.1-7.1.2 Untethered jailbreak ပြုလုပ်ခြင်း
ဒီနည်းလမ်းကို Windows ရော Mac တွင်ပါ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Jailbreak ပြုလုပ်မည့် ထုတ်ကုန်သည် iOS
7.1 မှ 7.1.2 အထိ အသုံးပြုထားသော ထုတ်ကုန်ဖြစ်ရန် လိုအပ်သည်။
ထို့နောက် အောက်ဖော်ပြပါ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြုလုပ်နိုင်သည်။
(၁) Pangu jailbreak tool ကို Windows သို့မဟုတ် Mac အတွက် download လုပ်ပါ။
(၂) Download ပြုလုပ်ပြီးလျှင် iOS ထုတ်ကုန်ကို ချိတ်ဆက်ပြီး Pangu tool ကိုဖွင့်ပါ။
Pangu jailbreak tool တွင် ထုတ်ကုန်၌ အသုံးပြထားသည့် iOS version ပေါ်လာလိမ့်မည်။
(၃) Jailbreak ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့နောက် ထုတ်ကုန်တွင် ရက်စွဲကို ၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂ ရက်သို့ ပြောင်းလဲ ခိုင်းလိမ့်မည်။
iOS ထုတ်ကုန်တွင် Settings > General > Date and Time သို့သွားပြီး Set Automatically ကို ပိတ်ပါ။
ပြီးလျှင် ရက်စွဲကို ၂ ရက် ဇွန်လ ၂၀၁၄ သို့ ပြောင်းပါ။
(၄) ထို့နောက်တွင် Google ဆာဗာက ခွင့်ပြုချက်ကို အကြိမ်ကြိမ် တောင်းခံလိမ့်မည်။ Continue ကို နှိပ်ပြီး
(၅) iOS ထုတ်ကုန် reboot ဖြစ်သွားသည့် အခါ home screen တွင် Pangu app ကို တွေ့ရပါမည်။ ၎င်းကို
ဖိထားပါ။ ထို့နောက် Continue ကိုနှိပ်ပါ။
(၆) ခဏ အကြာတွင် jailbreak လုပ်ငန်းစဉ် ပြီးဆုံးပါပြီ။ iOS ထုတ်ကုန် ကလည်း reboot ထပ်ဖြစ်သွား
ပါလိမ့်မယ်။ Jailbreak အဖွဲ့ရဲ့ Welcome message တွေပြီးရင် Cydia icon ကို တွေ့ရပါပြီ။
အင်တာနက် ဂျာနယ်မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
ကဏ္ဍ iDevice, iOS, iPhone, Jailbreak, Phone Application, ဖုန်းနည်းပညာ
iOS 7.1 Jailbreak Tool (Only For iPhone4)
iOS 7.1 တွေအတွက် Jailbreak Tool လေးပါ....... iPhone4ကိုပဲ Jailbreak လုပ်နိုင်သေးပါတယ်...။
iPhone4သမားတွေအတွက် သီးသန့်ပါ.. စမ်းသပ်ချင်သူများအတွက် geeksn0w 2.8 jailbreak tool Update လေးကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။ အသေးစိတ်ကို ဒီ မူရင်း Website မှာ လေ့လာနိုင်
Geeksn0w is the best tool for jailbreak iOS 7.1 latest version.
Lots of iPhone users waiting for the iOS 7.1 jailbreaking tool release.
Evasi0n team also still fail to release evasion7.1 jailbreak tool.
Because Apple has patched up evasion exploit with iOS 7.1.
Here is the good opportunity to jailbreak iOS7.1 with geeksn0w jailbreak tool.
Geeksn0w 2.8 is the latest update released yesterday.
The new update can fixamajor bug of geekSn0w dfuarch extension.
Now you can download geeksn0w 2.8 windows version by using above button.
Currently geeksnow windows version available.
NOTE : geeksn0w 2.8 jailbreak tool supports only iPhone 4.
Still developers did not mention this update supports for other iPhone, iPad or iPod series.
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Monday, April 14, 2014 No comments:
iOS 6.1.2 အသစ်ထွက်ရှိ evasi0n jailbreak 1.4 ထွက်ရှိ Jailbreak ပြုလုပ်ခြင်း
ကျွန်တော်ဒီနေ့ iOS 6.1.2 ထွက်တယ်လို့ သိရတာနဲ့... Firmware လေးဒေါင်းပြီး ၊ evasi0n 1.4 နဲ့
Jailbreak လုပ်ကြည့်တာ... အဆင်ပြေပြေနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်...။
အဲဒါ သူငယ်ချင်းတွေ သိရအောင် မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်....။
iOS 6.1.2 Firmware များ လိုအပ်ပါက အောက်မှာ ဒေါင်းယူပါ။
6.1.2 ကို Jailbreak လုပ်ဖို့ evasi0n ကို အောက်မှာ ဒေါင်းပါ။
အောက်မှာ evasi0n 1.4: အား ဒေါင်းယူ နိုင်ပါသည်။
evasi0n 1.4 နဲ့ Jailbreak ပြုလုပ် ရတာ လွယ်ပါတယ်... ဖုန်းကို pc မှာ ထိုးပြီးရင် evasi0n မှာ
သင့်ဖုန်းကို detect သိပြီ ဆိုရင် jailbreak button ကို နှိပ်လိုက်ရုံ ပါဘဲ။
အောက်မှာ ပုံလေးတွေနဲ့ တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်။
detect သိပြီဆိုရင် Jailbreak button ကို နှိပ်ပါ။
ဒီစာပေါ်လာရင် သင့် ဖုန်းမှာ ပေါ်နေတဲ့ jailbreak icon လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ။
Jailbreak ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးဆုံးပါပြီ။
Come On! Mobile မှ ကူးယူမျှဝေသည်။
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, March 21, 2014 No comments: